« Itondray tsikitsiky » : Mpanakanto maro hamelona ireo sangan’asan-dRakoto Frah
09/09/2017 admintriatra 0
Nitondra avo ny lazan’i Madagasikara eran’izao tontolo izao. 16 taona ny 29 septambra ho avy izao no nahafatesan-dRakoto Frah. Ho tsiahy ity andrarezin’ny fitsofana sodina ity, hanolotra ny seho « Itondray tsikitsiky », etsy amin’ny Calrton Anosy …Tohiny
Vehivavy gasy manambady teratany maorisiana iray indray no karohina mafy ao Maorisy ao noho ity farany nampiditra sigara Marlboro hosoka miisa 3.200 fonosana (cartouche) tany an-toerana. Nafenina tany anaty varavarana miisa 47 nafarana avy any …Tohiny
Vondrona Eoropeanina : Namatsy vola 33 tapitrisa Ar ho an’ny tetikasa “Dinika”
Mipetraka hatrany ny fahatokisan’ny mpamatsy vola an’i Madagasikara sy ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Noho izay indrindra, notontosaina omaly, tetsy amin’ny minisiteran’ny Vola sy ny Tetibola (MFB), ny fifanaovan-tsonian’ny fifanarahana amin’ny famatsiana ny tetikasa …Tohiny
Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana : Notolorana fitaovana vaovao ny TVM sy ny RNM amin’ny distrika efatra
Efa tsy nandeha nandritra ny fotoana naharitra. Noho ny fahatsapana ny fihenan’ny faritra afaka mandre sy mahita ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Malagasy (RNM sy TVM), indrindra ny any amin’ny faritra, notolorana fitaovana vaovao ny …Tohiny
Manao tohivakana ny fanohanana an’i Madagasikara sy ny Fitondram-panjakana. Taorian’ny Fihaonamben’ny Mpamatsy vola (CBI) notanterahina tany Paris, Frantsa, izay nahazoan’i Madagasikara famatsiana sy fanohanana mitentina 10,6 miliara Dolara mantsy, nanolotra tsy ampihambahambana ny azy koa ...Tohiny